ISEXWAYISO! Aros Energy nezimemezelo uqhubeke ukuthenga izindlu e Holm | Holmbygden.se
Posted on 30 Januwari, 2014 ngu Holmbygden.se
Namuhla abaludingayo futhi ukumbheka ukuthi ihlobene ibhizinisi mortgage e Holm. Naphezu zonke izihloko zezindaba kanye Aros Amandla nezimemezelo noJohan Stendahl ubudala “Skandalhus” ekwindla, njengoba inkampani siyaqhubeka zama ukuthenga amakhaya amasha e Holm. Ekwindla, baye okukhulunywa, kuhlanganise ukukhwabanisa amathenda ukuze Migration Board, Amabhithi ngesekhondi siqu abasebenzi angaphandle, Ama-oda iziphathimandla, abaqashi izakhiwo benganakiwe futhi ngendlela efanele.
Muva nje nje ngesonto eledlule ngokuthi Bengt Staaf enkompolo Condo “nemizana” esikoleni Anundgård futhi befuna ukuthenga singenamuntu 4:a kukhona. Kwakuyisikhathi wesine ngokulandelana ukuthi Aros Energy nezimemezelo zazizama ukuyicindezela ukuba phezu efulethini ngokusebenzisa abantu abahlukahlukene. Ngasekuqaleni kwaleli ekwindla, uye wazama uyithenga ngu Fredrik Wedel Tribe owayeneminyaka CEO iviki elilodwa kuphela (!) futhi “pAR Karlsson”, isibizo uJohan Stendahl wathi ukwenza sengathi. lapho brf:Holm futhi umphathiswa Castor semfene esolwa, bezingeke zikwazi ukuthola impendulo eqondile, futhi kwaba njalo ngendlela esolisayo, bekhetha ukungamlaleli ukuthengisa kubo. Ngakho-ke, kulokhu, futhi umbuzo kungaba ukhathazekile Aros Energy nezimemezelo babe umthengi futhi injongo efulethini ukuthenga, bentanta futhi izimpendulo.
Ngokulinganayo okungacaci watshela kwaba sekupheleni kuka-August lapho HBU baxhumane Bengt Staaf mayelana kukagesi e zabo (unkosikazi Li futhi umukhwe Bernts) impahla “Pensionärshemmet”. Yingaleso sikhathi-ke nomuntu engadalulwanga ababengezanga okuthiwa abangathanda baxhumane ngezinkinga. Aros Energy nezimemezelo kwase Bengt Staaf kuphela wezwa yize ke bacela imali yokuqasha yakhuphuka yaba abaqashile zabo. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva offenliggjordes Migration Board izinqumo isabelo Aros Energideklarationers ukukhoseliswa yokuhlala impahla. Ngemva kwamasonto ambalwa, Bengt Staaf lomqondisi wenkampani futhi ngemva kwezinyanga ezimbili, ngo-Okthoba, wayesemsebenzini kwalokho umnikazi iningi Aros Energy nezimemezelo (okuyinto naye onesitolo “Ezezindlu kathisha”).
Aros Energy nezimemezelo bese Bengt Staaf naphezu okuvela oda futhi izincwadi ziye angagcwaliseki ukuzibophezela kwabo noma iziphathimandla noma abaqashi babo. Kwamaphutha ne isikhunta futhi ukupholisa etholakalayo omnyama, bona abenzanga lutho mayelana. Noma isuswe futhi sanded namuhla Ekhaya Lesiphakeme, lapho umnikazi kudingwa ngumthetho ukuba senze. Bengt Staaf kuyinto ukukhanyiselwa mayelana nezinkinga futhi uthembisile ukuthi ngeke zingahlelwa, kodwa yize bangabanikazi impahla, akukaze kwenzeke lutho ebusika.
Nokho, ngosuku ngaphambi Eve uKhisimusi, kwakungamadodana esingokwemvelo ingane nomndeni e Anundgård isitatimende by lebhodi Michael Sterner ukuthi kumele uphume. Le nkampani iye wazama ngokuphindaphindiwe ukungethusa ukuze uthole umndeni ngezindlela ezahlukene. ehlobo Kugcine, bakhokha awekho amandla baze babe ngaphandle kwamandla ekhaya amabili (!) amasonto bese endlini yokuwashela ivaliwe ezinyangeni ezimbalwa. Konke lokhu naphezu kweqiniso lokuthi inkampani alinalo ilungelo ukuphoqelela umndeni, lapho kuthiwa ngokuphathelene namalungelo okusebenzisa umhlaba futhi onelungelo elingokomthetho ahlale. Ngisho uJohan Stendahl yena kanye Pia Karlsson athintana nomkhaya futhi wazama ukuba abathume, nakuba zinezikhwepha “akasenawo izakhiwo ukwenza”.
Lesi sikhathi icala Aros Energy nezimemezelo ku-oda kusuka Wezemvelo ukuthi phakathi kwabanye. esikhundleni amawindi ekhaya bese esifanelana waphinda uzama ukuphoqa ingane ukuba imindeni enezingane ukuze uphume. Ukulungiswa kungenziwa ngaphandle sokuhamba.
“CEO omusha wama-Aros Energy nezimemezelo”, “Indlu uthola ukuvinjelwa yokuthengisa”, “Stendahl enkantolo”
Funda izindaba ezihlobene kwamanye abezindaba ngenyanga edlule.
Entsha Yakha efulethini ngesikhathi inhlangano izindlu wakhetha ukuthengisa umkhaya onezingane ukuthuthela Holm ezinsukwini. Siyakwamukela Holm!